कति खाने कार्बाेहाइड्रेट स्वस्थ्य रहन ? - ज्ञानविज्ञान
Don't Miss it महिलामा किन बढी देखिन्छ ढाडको बाथ रोग ? यस्ता छन् यसका लक्षण र बच्ने उपाय
Up Next बोक्रामा कालो दाग हुने गरेको पाकेको केरा खानुभएको छ ? के हुन्छ यस्तो केरा खादा ? जान्नुहोस
विलियम ब्लेकका जान्नैपर्ने जीवन उपयोगी भनाईहरु
विलियम बलेक विश्वप्रसिद्ध कवी तथा चित्रकार हुन् । उनी अंग्रेजी साहित्यमा “द ल्याम्ब” र “द टाइगर” कविताका लागी प्रख्यात छन्…